ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာ၊ တီဗွီ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ, တီဗွီ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ, တီဗွီ
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ, တီဗွီ
Location: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Gatos CA US
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Gatos ကယ်လီဖိုးနီးယား
Netflix နဲ့ 125 ကျော်နိုင်ငံများတွင် 190 သန်းအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ထူးချွန်အကြောင်းအရာ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပို့ခြင်းဖြင့်တကမ္ဘာလုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူလူချိတ်ဆက်ပါ။ ကျနော်တို့လိမ္မော်ရောင်သစ် Black နဲ့, La CASA က de Papel ဖြစ်ပါသည်, Stranger အရာနှင့်တူတကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုမူရင်းအကြောင်းအရာပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆက်လက်ပါတယ်။
အဆိုပါအတွေ့အကြုံဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်ရေးအဖွဲ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါ '' လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ကူညီလို။
Netflix ဟာမှာဦးဆောင်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်, သငျသညျ, အတွေးအခေါ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွယ်ဝသောပန်းချီသောင်မတင်နှင့်ဘဝငါတို့၏ကိုယ်ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မအသစ်များကိုအတွေ့အကြုံများစမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျကျယ်ပြန့်စိတ်ကူးများအဖြေရှာတဲ့နှင့်စမ်းသပ်ရာမှပစ်လွှတ်မှတဆင့်ဒီဇိုင်းကိုအရည်အသွေးကိုသေချာရန်, ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မည်။ , အပြန်အလှန်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအကွာအဝေးအသုံးပြုခြင်းအမြင်အာရုံနှင့်ထုတ်ကုန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှု, သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အသင်းများကိုတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျအသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အောင်မြင်သောရလဒ်များမှဦးဆောင်စီမံကိန်းများအပေါ်ရှင်သန်လိမ့်မယ်။ အားလုံးအထက်, သင်ဘက်စုံပြဿနာများကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ဘက်စုံပြဿနာများလှပသောရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြီးတွေထင်နှင့်ဆုံနှင့်သင့်ရူပါရုံကိုဦးတည်ကြားမှာတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်စဉ်မတူကွဲပြားအယူအဆ / စိတ်ကူးများစူးစမ်း။
အင်ဂျင်နီယာ, ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု, သုတေသနနဲ့ content မိတ်ဖက်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်စေ။
အရည်အသွေးမြင့်မား wireframes, mockups, အသုံးပြုသူခရီးနှင့် Cross-platform အပြန်အလှန်ရှေ့ပြေးပုံစံကို အသုံးပြု. ဒီဇိုင်းအလုပ်ကွပ်မျက်စဉ်သုတေသနနှင့်ဒေတာများနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။
တိကျစွာပီသသောဒီဇိုင်းကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းစဉ်, သင့်အလုပ်ဝေမျှနှင့် Cross-function တင်ပြခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းအတွက်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ။
, အစဉ်မပြတ်စမ်းသပ်ဖို့စားပွဲအသစ်အတွေးအခေါ်များဆောင်ခဲ့သဖြင့် (သင့် Cross-functional ဖြစ်စေမိတ်ဖက်အပါအဝင်) တစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့လာအောင်နှိုးဆွသင်ယူပစ်လွှတ်။
ဘယ်လိုမဟုတ်ဘဲအဘယ်ကြောင့်များနှင့်အပြည့်အဝလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့် A / B စမ်းသပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ကိုဦးတည်နေတဲ့သဘာဝအဘက်လိုက်မှုရှိသည်။
မြင့်အနိမ့်နှစ်ဦးစလုံး bandwidth ကိုအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အရွယ်မှာ, အရည်အသွေးအတွေ့အကြုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒီဇိုင်နာများနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဘို့ mentorship သည်။
အတှေ့အကွုံ & ကျွမ်းကျင်မှု:
အတှေ့အကွုံမိုဘိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တီဗီ, ရေကြောင်းစားသုံးသူ-facing applications များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူ UX, UI ကို, HCI related လယ်ပြင်၌အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏ 8 + နှစ်ပေါင်း။
ဒီဇိုင်းအသင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဦးဆောင်3+ အတွေ့အကြုံအနှစ်တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတှေ့အကွုံမျိုးစုံပလက်ဖောင်း (တီဗီ, iOS, Android မိုဘိုင်းဝက်ဘ်, Desktop ကို, etc) အပေါ်အကြီးစားစနစ်ကဒီဇိုင်းများနှင့်မူဘောင်ဒီဇိုင်း။
သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု key ကိုကာယကံရှင်များရဲ့နောက်ကွယ်ကကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တို့အကြားနိုင်စွမ်းအပါအဝင် Excellent ကပါးစပ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု။
ဒီဇိုင်း tools များ (စသည်တို့ကို Sketch, Photoshop ကို, Illustrator,) နှင့်အတူမြင့်မားတတ်ကျွမ်း။
(စသည်တို့ကို framerate, နိယာမ, စက္ကူခေါက်ခြင်း, invisible စတူဒီယို) အပြန်အလှန်ရှေ့ပြေးပုံစံ tools များနှင့်အတူကျွမ်းကျင်။
, စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအခြေအနေများတွင်ရှင်သန်နေတဲ့ Self-starter ဖြစ်နှင့်ရူပါရုံကို-Level နှင့်လက်ပေါ် pixel-Level အလုပ်အကြားအဆင်ပြေ switching ဖြစ်နိုင်စွမ်းကို။
စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏, ရင့်ကျက်ခြင်း, အတ္တ-အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျလင်းလင်းတုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်အပြုသဘောအဖြစ်ကောင်းစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
တီဗီ, ဝဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application များအတွက်အလုပ်နမူနာအစုစု။
အဘယ်သူ၏တစ်ဦးချင်းစီအားသာချက်အချင်းချင်းဖြည့်စွတ်ပါရမီ, ကျွမ်းကျင်သူ-Level ဒီဇိုင်နာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်တန်ဖိုးထားကြသည်ရှိရာတစ်ဦးအနီးကပ်ခညျြနှောငျ, Open-စိတ်ပတ်ဝန်းကျင်: ကျနော်တို့ကြော့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးအရာနှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
ပူးပေါင်း၏စကားပြောသောကြောင့်ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု, အင်ဂျင်နီယာ, နှင့်စျေးကွက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည်ဟုဝေဖန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအလွန်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းများဈေး၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဗီဇနှင့်နည်းမနောအကြောင်းကြားရန်စားသုံးသူသိပ္ပံ, မက်ထရစ်နဲ့စမ်းသပ်ခြင်းကိုသုံးပါဒါကြောင့်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအထွဋ်ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏လျော်ကြေး, အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Netflix ဟာစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖတ်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဤကျနော်တို့နေ့စဉ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတာဝန်ခံကိုင်ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သကဲ့သို့, ခဏယူနှင့်ကထုတ်စစ်ဆေးပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အသင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်မှာလြှို့ဝှကျထှကျသှား peek ချင်ပါတယ်ဆိုလျှင်, YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Netflix နဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။
CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-06-29
ယခင်: Instagram ကိုဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး
နောက်တစ်ခု: front-အဆုံး Web Developer